Cristiano Ronaldo oo rikoor cusub ka sameeyay kooxda Real Madrid – Gool FM
Cristiano Ronaldo oo rikoor cusub ka sameeyay kooxda Real Madrid
(Real Madrid) 19 Maajo 2018. Xiddiga kooxda Real Madrid Cristiano Ronaldo ayaa rikoor cusub u dhigay kooxda Real Madrid kulanka ugu dambeeya horyaalka La Liga ay xili ciyaareedkan ku booqdeen kooxda Villarreal.
Cristiano Ronaldo ayaa goolka labaad u dhaliyay Real Madrid daqiiqadii 32-aad ee qeybta hore ciyaarta ka dib markii uu kubad cajiib ah ka helay Marcelo.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Sky Sports” Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyay goolkiisii 450-aad ee Real Madrid kadib 437 kulan uu u ciyaaray dhamaan tartamada oo dhan tan iyo 2009 uu kaga soo biiray kooxda Manchester United.
Xili haatan qeybtii labaad ee ciyaarta ay labada kooxood dib ugu soo laabteen ayay Real Madrid kulankan wali kaga hogaamineysaa Villarreal 2-0 oo ah kala dhaliyeen Gareth Bale iyo Cristiano Ronaldo daqiiqadihii 11aad iyo 32aad sida ay u kala horeeyaan.
Hazard oo hadlay kaddib markii ay ku guuleysteen FA Cup.......(Miyuu ka tagayaa Chelsea??)
SAWIRRO: Leicester City oo sameysay saxiixeedii ugu horreeyay xilli ciyaareedka cusub